Microsoft က Dynamics ကို 365 | CRM & ERP ၏ပေါင်းစပ် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
1 မာ 2017
Dynamics ကို 365 ကဘာလဲ?
ဘုံမှာ Data မော်ဒယ်
ရုံး 365 နှင့်အတူပေါင်းစည်းမှု
အဘယ်အရာကိုငွေပမာဏကို Microsoft က Dynamics ကို 365 ကုန်ကျစရိတ်သနည်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယနေ့အခက်အခဲများရှာဖွေနေကြသည်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းဖို့တုံ့ပြန်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။ သူတို့အကြိုးခံစားခှငျ့ကိုလုပ်ဖို့ပိုအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်အလွယ်တကူ၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေး၏အသီးအသီးချောမွေ့ထိုကဲ့သို့သောမူဘောင်နှင့်အတူ littler နှင့်ပိုကြီးအသင်းအဖွဲ့များအားသာချက်နှစ်ဦးစလုံး။ လက်ရှိအခြေအနေများတွင်အများဆုံးမျှော်လင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းအကြားတစ်ဦးက standout Microsoft က Dynamics ကို 365 ဖြစ်ခဲ့သည်။
Microsoft က Dynamics ကို 365 unleashing နှင့်တကွ, ယူဆချက်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းအနေနဲ့အဆုံးရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူတက် built Microsoft က Dynamics ကို 365 တစ် CRM (ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) သို့မဟုတ်တစ်ဦး ERP (လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း), သေးနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးရောနှောမနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီခန့်မှန်းထားသည်။ Dynamics ကို 365 မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးအလိုက်အထိုက်နေတတ်နှင့် redid ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်တစ် canny cloud-based ERP နှင့် CRM ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft က Dynamics ကို 365, ပထမဦးဆုံးဌာန၌, အသင်းအဖွဲ့များမှတစ်ဦးစင်မြင့်ပေးစေခြင်းငှါသူတို့၏စစ်ဆင်ရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တိကျတဲ့အခြေအနေနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသို့ fit ရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည့်စနစ်သို့စီး။ နည်းနည်းအားဖြင့် bit သင် Microsoft က AppSource အပေါ်လိုအပ်ကြောင်းထုံးစံဖြေရှင်းချက်အရပါလိမ့်မယ်။
Madeira - ဒါဟာ code အမည်အောက်မှာ propelled ခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အကျိုးအတွက်အလိုအလျောက်များနှင့်ဖောက်သည်အကျိုးအတွက်တိုးချဲ့, အထောက်အကူနှင့်စစ်ဆင်ရေး, ဟန်ပြ, ဘဏ္ဍာရေး, လယ်ပြင်အကျိုးအတွက်အပေးအယူများကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသော hierarchical စွမ်းရည်ကိုကြီးကြပ်မယ့်အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်ထုတ်လုပ်သော applications များပါဝင်သည်။ သူတို့ကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စစ်ဆင်ရေးများအတွက် Dynamics ကို 365, ဖျော်ဖြေမှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Dynamics ကို 365 အရောင်းအဘို့အ Dynamics ကို 365, စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှု Automation နှင့် Dynamics ကို 365 များအတွက် Dynamics ကို 365 အဖြစ်အမည်ရှိနေကြသည်။
Microsoft က Dynamics ကို 365 Microsoft ရဲ့ Office ကို 365 နှင့်တစ်ဦးခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု API ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များနှင့်အတူခိုင်မာသောပေါင်းစည်းမှုကမ်းလှမ်းသောဘုံ data တွေကိုမော်ဒယ်ရှိပါတယ်။ Cortana ထောက်လှမ်းရေး, ပါဝါ BI နှင့်အရာများ၏အင်တာနက်ဗဟို၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက် Microsoft က Dynamics ကို 365 အချို့သောအဘို့ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒီမှာ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ AppSource - ထို client များအခြားစတိုးဆိုင်များတွင် application များ peruse နိုင်ပါတယ်။
Microsoft က Dynamics ကို 365 အထူးသဖြင့် Outlook နဲ့အတူရုံး 365, အတူချောချောမွေ့မွေ့ပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ်။ သငျသညျကျခွငျးမရှိ Outlook နဲ့ထံမှမှတ်တမ်းများ, အစီရင်ခံစာများနှင့်မြှူဆွယ်တောင်းခံပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုနည်းတူအီးမေးလ်ဖောက်သည်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲမှတ်တမ်းများကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုနည်းတူသင်တို့ကိုမြောက်မြားစွာဖောက်သည်စာပို့ကြသောအခါ sidebar မှာအားလုံးအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အဆင့်အတန်းအကောင့်, ဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများတွေ့နိုင်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဒီပေါင်းစည်းမှုထူးခြားသောထွက်အလုပ်လုပ်စေပါ။
Microsoft က Dynamics ကို 365, လုပ်ငန်းနှင့် Business လွှတ်ပေးရန်နှစ်ခုဗားရှင်းရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့များ 250 clients များထက် ပို. ရှိသည်သောဖြစ်ရပ်မှာတော့လုပ်ငန်း Edition ကိုသင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ clients များ 10 မှ 250 န်းကျင်ရှိပါတယ်လျှင်, ထိုအချက်ကိုကြားမှမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလွှတ်ပေးရန်သင်တို့အလိုအစေခံပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေး Edition ကို littler အသင်းအဖွဲ့များတဝိုက်ဗဟိုပြုနေသည်ကတည်းက, ဒီလမ်းအတွက်ကြောင့် Financials များအတွက် Dynamics ကို 365 ထည့်သွင်း။ အဆိုပါလုပ်ငန်းဗားရှင်းအဘို့, Operations 365 ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည့်အဝ client များအဘို့, ခွင့်ပြုစီးပွားရေး Edition ကို client ကိုတစ်ဦးလျှင် $ 50 လစဉ်လတိုင်းပါပဲ။ အလင်းကို client များလစဉ်လတိုင်းကို client နှုန်း, $5မှာအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ နေစဉ်လုပ်ငန်း Edition ကိုနှစ်ခုအစီအစဉ်များအတွက်လာ - 1 စစ်ဆင်ရေး၏ချွင်းချက်နှင့်အတူထောင့်အသီးအသီးတို့ပါဝင်သည်စီစဉ်ပါ။ ဒါဟာလစဉ်လတိုင်းကို client နှုန်း $ 115 တန်ဖိုးထားသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်2စစ်ဆင်ရေးအပါအဝင်အရာအားလုံးထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လစဉ်လတိုင်းကို client နှုန်း $ 210 အဖြစ်တန်ဖိုးထားသည်။ အလင်းကို client များလစဉ်လတိုင်းကို client နှုန်း $ 10 မှာအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကိုအလွန်ကြော်ငြာ '' ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုက 'အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းနှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သွားကြဖို့ကောင်းလှ၏။ အဆိုပါဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသံသယမရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အဘို့မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ကြသည်။ Microsoft ရဲ့ကြိုတင် CRM နဲ့ ERP ဗားရှင်းလတ်တလောပြန်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူရှေ့တော်၌နေဆဲဖြစ်သည်။
SharePoint 2016 ဗိသုကာ: developer များအသစ်ကဘာလဲ?